घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू केएलियन एमपीपी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
हाम्रो Kylian Mbappe जीवनी तपाईंलाई उनको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, आमा बुबा, भाइहरू, प्रेमिका, पत्नी हुनु, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो बन्डी मूलको फ्रान्सेली फुटबलर, Mbappe को संक्षिप्त इतिहास हो। हामी उनको शुरुका दिनहरूदेखि कहिले र कसरी उहाँ प्रख्यात भएको शुरू गर्दछौं। तपाईंलाई Kylian Mpappe को बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उहाँको जीवनको मार्गचित्रको ग्यालरी छ।
चित्रहरूमा Kylian Mbappe जीवनी - आफ्नो शुरुआती दिन देखि जब उहाँ एक सुपरस्टार बने।
हो, तपाईं र मलाई Mbappe थाहा छ उहाँको उत्कृष्ट गति र करीबी बल नियन्त्रणको लागि। साथै, तथ्य यो छ कि उहाँ हुन सक्छ २०२१ गर्मी विन्डोमा सम्भावित ठूलो ट्रान्सफर.
प्रशंसकको बाबजुद, हामी बुझ्छौं कि केवल केहि व्यक्तिले Mbappe को एक संक्षिप्त जीवन कहानी प्रयोग गरेका छन्। LifeBogger यो तयार पारेको छ, तपाइँको पढाइको आनन्दको लागि, र खेल प्रेम को लागी। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Kylian Mbappe बचपन कहानी:
जीवनी सुरुवातीहरूको लागि, उहाँ पूर्ण नामहरू राख्नुहुन्छ; Kylian Adesanmi Lottin Mbappé। यो फुटबलर डिसेम्बर १ 20 1998 of को २० औं दिनमा फ्रान्सको उत्तरपूर्वी पेरिस उपनगरमा उनकी आमा फ्याजा एमबाप्ले लामारी र बुबा विल्फ्रेड एमबाप्पको जन्म भएको थियो।
फ्रान्सले १ 1998 11 World को स्ट्याडे डि फ्रान्समा विश्वकप जित्यो जुन उनको परिवारबाट ११ किलोमिटर टाढा छ। Kylian Mbappe आफ्नो बुबाआमाको पहिलो बच्चाको रूपमा संसारमा आउनुभयो।
Kylian Mbappe का आमा बुबालाई भेट्नुहोस् - उनका बुवा, Wilfried and Mum, Fayza Lamari। अवलोकन गरिए अनुसार, फुटबलर मिश्रित जाति जातीय पृष्ठभूमिबाट आउँदछ।
सत्य भन्नु हुन्छ, Kylian जवानीका वर्षहरु त्यो रमाईलो थिएन। उनी पेरिस उपनगर (बन्डी) मा हुर्केका थिए, एक समय यो शहर हिंसा र दंगाले भत्काएको थियो। २०० 2005 को दंगा कम्यूनको सबैभन्दा खराब अवस्था थियो किनकि यसले धेरै कारहरू र सार्वजनिक भवनहरू जलाएको देखियो।
Kylian Mbappe परिवार एक पटक फ्रान्सको बन्डी कम्युनमा सार्वजनिक प्रदर्शन र अराजकको सामना गर्नुपर्‍यो।
यी सबै त्यहि ठाउँको वरिपरि भयो जहाँ Mbappe का आमा बुबाको परिवार घर थियो। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, बन्डी शहर हो दंगा र सामाजिक कलहको पर्यायवाची। मानिसहरू पेरिसबाट केवल १० किलोमिटर टाढामा रहेको उपनगरलाई अपराध र आतंकवादको प्रजनन स्थलको रूपमा लिन्छन्। यो द्वारा प्रकट गरिएको थियो न्यु योर्क टाइम्सको लेख Kylian Mbappé र The Boes from Banlieues मा.
बाल्यावस्थामा बस्ती आन्दोलनको अनुभवको बावजुद, भविष्यको फुटबल GOAT को नियत निश्चित भयो। यो किनभने विलफ्रेड एमबाप्पे, उनका बुवा (एक फुटबल कोच) अशान्ति को सामना मा पनि आफ्नो बच्चाको भविष्यको रक्षा गर्न कसम खाए।
बन्डी छिमेकमा हुर्केका, जवान Kylian कहिल्यै फुटबल बल जान दिनुहुन्न। Mbappe को व्याकुल उहाँ जहाँसम्म उनी आफ्नो फूटबललाई आफ्नो ओछ्यानमा लगेर सुतेका लागि तकियाको रूपमा प्रयोग गर्दै गए। एउटा अन्तर्वार्तामा, उनका बुवा, विलफ्राइडले एक पटक उनको फुटबलले ग्रस्त बच्चाको बारेमा भने;
फुटबल सफलता कुनै दुर्घटना होईन। एक बच्चाको रूपमा, Kylian सोडरबल यति धेरै जान दिएन कि उहाँ यसलाई एक निद्रा उपकरण को रूप मा प्रयोग गर्दछ।
“क्यालिआन फुटबलको बारेमा बढी उत्साहित भएका छन्। मलाई लाग्छ ऊ पागल छ। यसको लागि उसको प्रेम लगभग मलाई रोक्दछ पनि तपाईं म एक फुटबल कोच को रूप मा हेर्नुहुन्छ।
ऊ सँधै योमा रहन्छ, २--2-4। Kylian सबै कुरा हेर्छ। उसले लगातार चार वा पाँच खेल हेर्न सक्छ। ”
Kylian Mbappe परिवार पृष्ठभूमि:
फ्रान्सेली मानिस एक एथलेटिक मध्यमवर्गीय घरपरिवारबाट आउँछ जसले जीवन शैली खेलकुदको वरिपरि केन्द्रित गर्दछ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, Kylian Mbappe को परिवार बन्डीको ठूलो श्रमजीवी समुदायको हो। अब, हामी यस क्षेत्रलाई पश्चाताप गर्ने शहरको रूपमा चिन्छौं जुन उनीहरूको महान फुटबल नायकलाई श्रद्धांजलि दिन्छ। यहाँ भवनमा पोष्टर छ जहाँ Mbappe ले आफ्नो बाल्यकाल बित्यो।
एक पटक, Kylian Mbappe को परिवारको यस भवन मा एक फ्लैट स्वामित्व छ।
आफ्ना बाबुआमाको साथ सुरु गर्दै, घरका प्रमुख विल्फ्रेडले धेरै वर्ष फुटबल कोचको रूपमा बिताए। Fayza Lamari, उसकी आमा, एक ह्यान्डबल खेलाडी को रूप मा एक सफल क्यारियर थियो।
सुरुबाट, Kylian Mbappe का बाबुआमाले सुनिश्चित गरे कि तिनीहरूका परिवारका प्रत्येक सदस्यले खेललाई आफ्नो एकमात्र पेशाको रूपमा लिनेछन्। विरफ्रेडको अपनाईएको बच्चा जेरेस केम्बो-एकोको, एक पेशेवर फुटबल खेलाडी हो। उनका बाँकी आधा भाइबहिनी पनि उहाँको पाइलामा हिडेका छन्।
Kylian Mbappe परिवार मूल:
सबैलाई थाहा छ उनी पेरिसको उत्तरपूर्वी उपनगरहरुमा फ्रान्सेली कम्युनि बोन्डीका हुन्। जहाँसम्म किलियन एमपाब्बेको परिवारको जराबारे धेरैलाई कम जानकारी छ - जुन हामी उनको जीवनीको यस खण्डमा व्याख्या गर्नेछौं।
शुरुवातकर्ताहरूको लागि, हामी तीन वटा अफ्रिकी देशहरूमा उसको वंश बाँध्यौं; नाइजेरिया र क्यामरून (उसको बुवा मार्फत) र अल्जेरिया (उनको आमाको माध्यमबाट)। क्यालिसियनका बुबा, विल्फ्रेड एमबाप्पे नाइजेरियाको परिवारका जराका साथ क्यामेरोनियाका हुन्। एक पटक शरण पाएपछि, उहाँ हरियो घाँसहरूको लागि खोजीमा उत्तरी फ्रान्समा बसाई सरे। Kylian आमा Fayza Lamari काबाइल मूल को अल्जेरियन हो।
Kylian Mbappe मिश्रित जाति परिवार जराबाट आउँदछ। हामी भन्न सक्छौ कि ऊसंग अल्जेरियन, क्यामेरोनियन र नाइजेरियाको रगत छ।
फ्रान्सेली मिडियाका अनुसार, विल्फ्रेडले स्थायी बसोबासको लागि एउटा अल्जेरियाली-फ्रान्सेली महिला फेजा लामारीसँग विवाह गरे। काबाइल मूलबाट महिला पछि आत्म प्रशंसित भविष्य फुटबल GOAT को आमा बन्नुभयो।
Kylian Mbappe's शिक्षा - ऊ स्कूलमा गयो?
यद्यपि फुटबल उनको बाल्यकालको बोलावट बन्यो, ती जवानले serv देखि ११ वर्षको उमेरसम्म कन्सर्वेटरी संगीत स्कूलमा भाग लिए। त्यहाँ छँदा क्याइलनले संगीत पढ्न र बाँसुरीको अध्ययन गर्न सिके। सोकर पछि उनले आफ्नो दोस्रो सर्वोत्कृष्ट शौक (गाउँदै) सिक्न मद्दत गरेकोमा उनी आफ्ना शिक्षक, क्लाइन बोगिनीलाई श्रेय दिन्छन्।
केही दिन पछि, जब उनका संगीत शिक्षकले गाउने कामको अगुवाइ लिईरहेका थिए, Kylian उनीसँग सामेल भए र उनीहरू सँगै बन्डीको टाउन हल पार्कमा शान्त प्रदर्शन गरे। गीतहरूको भण्डार एकदम फरक थियो - तपाईं प्रायः फ्रान्सेली गीतहरू हुनुहुन्थ्यो।
संगीतको लागि थोरै समय दिएर, सानो Kylianले "होईन" महत्वहीन चीजहरूलाई पूर्ण समयको आधारमा स्कूल जाने जस्ता कुरालाई। तपाईं उहाँ संक्षिप्त स्कूल पढ्नुभयो - जहाँ उहाँ सँगै सहपाठी हुनुहुन्थ्यो विलियम सालील। पछि, पीएसजी स्टारले धेरै जसो समयको लागि फुटबल कक्षा लिन शुरू गरे। खेल चरनबाट टाढा, विल्फ्रेड उनका बुबा काइल्यानसँग केही निजी अध्ययन सत्रहरू थिए। सारांशमा, यो क्याइलियनको आफ्नै घर शिक्षाको तरीका थियो।
Kylian Mbappe अनटोल्ड फुटबल कहानी:
Kylian Mbappe आफ्नो बाल्यावस्था मा - केहि हप्ता पछि एएस बन्डीमा सामेल हुनुभयो।
उहाँ छ वर्षको उमेरमा, २०० 2004 मा, विलफ्राइडले आफ्नो कोचिंग हेरचाहको तहत एएस बन्डीमा सानो Kylian भर्ना गरे - जसमा यो काम गर्ने ठाउँ थियो। त्यो क्षणदेखि, फुटबलको विकासमा कुल ध्यान दिन सुरु भयो। सकेसम्म चाँडो, प्रोकसिस वाइज बच्चाले एएस बन्डीलाई ट्राफियां काट्न मद्दत गर्न थाले।
भविष्य को फुटबल GOAT बैगन फसल कटाई ट्राफी एक निविदा उमेर मा।
आफ्नो बुबाको सहयोगमा, सानो Kylian द्रुत रूपमा समाहित भयो, क्लिनिकल फिनिशिंग, गति र ड्रिब्लिंगको कार्य। वास्तवमा, एएस बन्डीमा उनका युवा प्रशिक्षक, एन्टोनियो रिककार्डी, एक पटक उनको बारेमा भनेका थिए;
पहिलो चोटि मैले क्याइलियनलाई प्रशिक्षण दिएँ, तिमी भन्न सक्छौ कि ऊ एकदमै फरक थियो। ऊ ए एस बन्डीमा अन्य बच्चाहरू भन्दा धेरै गर्न सक्थ्यो।
क्यालिआनको ड्राईबलिling पहिले नै राम्रो थियो, र उनी अन्य भन्दा धेरै छिटो थिए। उनी मेरा सर्वश्रेष्ठ १ player बर्ष उमेरका कोचिंग बच्चाहरूमा सर्वश्रेष्ठ खेलाडी भए। पेरिसमा मलाई धेरै सीपहरू थाहा छ, तर मैले उहाँ जस्तो कहिल्यै देखेको थिइनँ।
बैठक फुटबल नायकों को प्यारेन्टल रणनीति:
गैर फुटबल खेल्ने समयमा, साथीहरूसँग बाहिर जाँदै थिएन वा बच्चाहरूको लागि कुनै प्रकारको घटनाहरूमा भाग लिइरहेको थिएन। Kylian विपरीत विलियम सालील (पनि प्रशिक्षक र आफ्नो बुबा द्वारा हेरचाह) प्रायजसो बच्चाहरु को जस्तो सामान्य जीवन जस्तो कहिल्यै बाँच्न।
जन्मदिन वा बच्चा पार्टीहरूमा भाग लिनुको सट्टा, उनका आमाबाबुले छोरालाई हुर्काउन फरक दृष्टिकोण अपनाए। उनीहरूले क्यालियनलाई फुटबल नायकहरूसँग भेट्ने कुराको कल्पना गरे। फेजा र विल्फ्रेडको पहिलो लक्ष्य फ्रान्सेली प्रतिमा थियो - थियरिरी हेनरी.
कहिल्यै नबिर्सने एक क्षण मानिन्छ, आर्सेनल पौराणिक कथा भेट गर्नु एकदम राम्रो अनुभव हो। त्यतिखेर थाइरी हेन्रीलाई थाहा थिएन कि उनी year बर्षे केटाको साथ थिए जसले आफ्नो दुई राष्ट्रिय रेकर्ड तोड्नेछ।
पढ्नुहोस् समर नास बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
थिरी्री हेनरीलाई, यो एक पटक ती साधारण बच्चाहरू मध्येको थियो।
साहसी बच्चाका लागि दोस्रो अर्को बस स्टप उसको आमा - फेजा लामारीको परिवारसँग मिल्दोजुल्दो मान्छेलाई भेट्ने योजना बन्यो। समयमा उहाँ भेट्नुभयो Zinedine Zidane, रियल म्याड्रिड दन्तका थोरैलाई थाहा थिएन कि उसको च्याम्पियन्स लिग रेकर्ड एक साधारण केटोले तोड्न सक्छ।
ओह! यदि केवल Zidane उनी कोसँग उभिएको थियो थाहा थियो। हामीलाई लाग्छ कि उनी अहिले पश्चाताप गर्दछन् - किनकि उनले क्यायलियन मब्प्पेको भविष्य बताउन सकेनन्।
जारी पिता-पुत्र सम्बन्ध र फुटबल परीक्षणहरूको लागि क्वेस्ट:
विलफ्राइडको लागि, जीवनको वास्तविकताहरूसँग सुसज्जित हुन अघि उनको छोरो मानिस बन्ने प्रतिक्षा थिएन। बुद्धिमती बुबाले धार्मिक रूपमा आफ्नो क्यालिआनसँग मायालु बन्धन निर्माण गर्नुभयो - जीवनमा सानै उमेरमा उसलाई सबै कुरा बताउनुहुन्थ्यो। त्यस पछि, जब तिनीहरू बाहिर टु .्गिन्छन्, यो सँधै फुटबलको बारेमा छलफल हुने थियो। यो साँचो बुबा छोराको मित्रताको छाप हो कि कोही पनि विच्छेद गर्न सक्दैन।
विलफ्राइडले आफ्नो छोरालाई के दिन सक्छ कि उसले के दिन्छ। यो एक मेल नखाने फादर-पुत्र बन्धन हो।
रेग्नेस ट्रायलमा बिग ब्रदर भ्रमणबाट:
त्यस दिन, क्यालिआन र तिनका आमाबुबा नियमित रूपमा स्ट्याडे रेनाइसलाई भेट्न जाइरस केम्बो-एकोको, उसको जेठो भाई (जहाँ उनी खेल्छन्) हेर्न आएका थिए। एमबाप्पेले किशोरावस्थामा पुगेको समयमा, विलफ्राइडले महसुस गरे कि आफ्नो छोरोको लागि आफ्नो काम दरबार (एएस बन्डी) छोड्ने समय एकदमै राम्रो छ।
तसर्थ, उनीहरूको छोराको लागि स्टडेड रेन्नइस एफसीमा ठूलो भाइ, जीरस केम्बो-एकोको सँग सम्बन्ध राख्नु परिवारको विचार हो। क्लबले Kylian लाई ट्रायलमा आमन्त्रित गर्‍यो - जुन १२ बर्ष मुनिका लागि डिटेक्टि tournament टूर्नामेन्टको रूपमा आएको थियो। यहाँ Stad Rennais किट्स लगाएको सानो Kylian छ। के अनुमान गर्नुहुन्छ?… उसले एक्लो हातले आफ्नो टीमलाई प्रतियोगिता जित्न मद्दत गर्‍यो।
त्यो प्रतियोगितामा, Kylian सबै भन्दा फरक थियो। कसै-कसैले ईर्ष्याको साथ उहाँलाई कसरी हेरेछन् हेर्नुहोस्।
टूर्नामेन्ट पछि र स्ट्यान्डआउट कलाकारको रूपमा, Kylian रेन्नइस भर्ती टीमको लागि प्राथमिकता १ बन्न पुग्यो। निराशाको कारण, क्लब फिजा र विलफ्राइडलाई आफ्नो एकेडेमीमा भर्ना गरेकोमा प्रलोभनमा पार्न अधिकारीलाई उनको परिवारको घर पठाउन पठाइएको थियो। Dréossi को शब्दहरु मा - एक Rennes कर्मचारीहरु;
हामीले यथासक्दो प्रयास गर्यौं। मेरो टोली बन्डीमा धेरै पटक आफ्ना बाबुआमासँग कुराकानी गर्न गएको थियो। ती मानिस हुन् जसलाई हामी राम्ररी जान्दछौं। Wilfried र Fayza धेरै चाखलाग्दो खेल व्यक्तिहरू हुन्। हामीले प्रस्तावहरू बनाउने प्रयास गर्‍यौं, तर सफल भएन। बिडिंग भयो, र हामी रेस जित्न असफल भयौं।
विफल रहे रेन्ने वार्ता पछि, Mbappe अन्ततः फ्रान्सेली राष्ट्रिय फुटबल स्कूल मा स moved्यो। क्लेयरफोटेन फ्रान्सको राष्ट्रिय फुटबल केन्द्र हो। तिनीहरू सम्पूर्ण देश मा सबै भन्दा राम्रो बच्चाहरु प्रशिक्षण मा विशेषज्ञता।
केवल ठूला फुटबल सम्भावनालाई क्लेयरफोटेनको लागि खेल्न अनुमति छ। Kylian Mbappe ती मध्ये एक थियो।
त्यहाँ फुटबल सिकेर, Kylian फेमर को हल भयो। उनी थियरी हेनरी, निकोलस अनेल्का जस्ता प्रख्यात स्नातकहरूमा सामेल भए। Blaise Matuidi, हातेम बेन अरफा र विलियम गलास। प्रभावशाली प्रदर्शन को एक मेजबानमा राख्दै, यूरोपीयन ठूला क्लब अर्थात्; चेल्सी, रियल म्याड्रिड, लिभरपूल, म्यानचेस्टर सिटी र बायर्न म्यूनिख आदिले उनलाई परीक्षणको लागि आमन्त्रित गरे।
Kylian Mbappe जीवनी - प्रख्यात कहानी को मार्ग:
१२ बर्षको उमेरमा, नौजवानले आफ्नो क्षमताको परीक्षण गर्न चाहने यूरोपियन टोलीहरूसँग भेट गर्ने यात्रा शुरू गर्यो। पहिलो बस स्टप इ England्ल्यान्ड हो। त्यहाँ आइपुग्दा, Kylian Mbappe का बाबुआमाले एउटा अपार्टमेन्ट बुक गरे, जहाँ उसले आफ्नो मूर्तिको वालपेपरहरू समातेर लगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो - आफ्नो कोठामा।
यो Kylian Mbappe कोठा को बच्चा जस्तै देखिन्थ्यो कसरी थियो। यो देखा पर्‍यो कि उनले सीआर worshiped लाई पूजा गरे।
चेल्सी ट्रेलमा, उत्साहित बच्चा इ England्ल्यान्डको स्टारलेटको साथ खेले टमी अब्राहाम र जेरेमी बोगा। खेल पछि जहाँ उनको टीमले चार्ल्टन (-8-०) लाई जित्यो, खुशीयाली क्यालिआन घर फर्किए। इतिहास यो छ कि Mbappe उनको निजीकृत चेल्सी शर्ट को साथ मानसिकता संग सोचिएको छ कि उसले क्लबको मन जितेको छ। दुर्भाग्यवस, चेल्सी एफसीले उनलाई कहिले पनि बोलाएन।
यो Kylian Mbappe एक चेल्सी शर्ट र आईडी कार्डको साथ हो। यो क्लबको लागि उनको परीक्षण पछि मात्र उहाँलाई अस्वीकार गरियो।
वास्तविक मैड्रिड बाल्यकाल अनुभव:
दु: खी इ England्ल्यान्डको अनुभव पछि, Kylian Mbappe का आमा बुबाले Zineine Zidane द्वारा रियल माद्रिद भ्रमणको निम्तोलाई सम्मान गर्नुभयो। परीक्षणको लागि त्यहाँ हुँदा, उनले आफ्नो एक मात्र मूर्तिलाई भेट्ने धेरै प्रतिक्षा गरिएको अवसर पाए, क्रिस्नोनो रोनाल्डो.
अन्त्यमा जवानको लागि, उसले खेलाडीलाई नक्कल गरेको हेर्नको लागि विशाल सपना पार भयो। पछि, सीआर even ले कहिले पनि विश्वास गरेन कि सानो बालकले उसले एक पटक देखेको थियो, विश्व फुटबलमा उसको प्रभुत्वलाई चुनौती दिनेछ। वास्तबमा, Kylian Mbappe च्या चैम्पियन्स लीग शीर्षक प्रशंसकहरू उहाँ र CR7 बीच तुलना ल्याउन सुरू गर्नु अघि एउटा चीज छोडियो।
Kylian Mbappe जीवनी- सफलता कहानी:
युरोपेली क्लब र उनका आमा बुबा बीच असफल वार्ता पछि, जवान अन्ततः मोनाको संग बसे। एएसएम संग, Kylian Mbappe शक्ति देखि एक अर्को ताकतमा जानुभयो, जुन उनले चाँडै उनीहरुको अकादमी बाट सीनियर फुटबलमा स्नातक भएको देखे। हामीले उसको केहि एएस मोनाको बाल्यकाल हाइलाइटहरू पाएका छौं।
उसको सम्पूर्ण परिवारको आनन्दको लागि, Mbappe ले पहिलो व्यावसायिक अनुबन्धमा हस्ताक्षर गर्यो - मार्च २०१6को 2016th तारिखमा। दुर्भाग्यवस, सानो खेल समयको साथ, युवा अगाडि निराश भए। यो गर्मी स्थिर भयो किनकि उनको बुवाले आक्रोश देखाए। , विलफ्राइडले कडा चेतावनी जारी गरे कि उनका छोराले जनवरीको विन्डोमा ट्रान्स्फर खोज्नेछ यदि कुरा परिवर्तन भएन भने। त्यसको लगत्तै मोनाको प्रबन्धक लियोनार्डो जार्डिमले मोन्टपेलियरको बिरूद्ध Kylian शुरू गर्ने निर्णय गरे।
त्यो खेलले Mbappe को सफलता देख्यो किनकि उनी मोन्टपेलियरको 6-२ विध्वंसमा भारी संलग्न थिए। त्यस दिनदेखि, उदाउँदो ताराले विश्व फुटबलमा फर्केर हेरेको छैन। २०१ 2–१– सत्रमा उनका २ goals गोलको साथ, क्यालिअनले मोनाकोलाई लिग १ का उपाधि जित्न मद्दत गरे।
PSG र २०१ F फिफा वर्ल्ड कप:
आफ्नो नाम संसारमा घोषणा पछि, एक स्थानान्तरण भीड पछ्याईयो। यसले पेरिस सेन्ट-जर्मेनले भुक्तानी गरेको १ record145 मिलियन डलर प्लस € million million मिलियन (एड-अनहरू) विश्व रेकर्ड ट्रान्सफरमा लगियो। क्लबमा, Mbappe PSG एक तिगुना, लिग १ प्लेयर अफ द इयर र शीर्ष स्कोरर जित्दै सहयोग गरेर सबै भन्दा महँगो किशोरको माग पूरा भयो।
मे २०१ 2018 मा, Mbappe रूस २०१ World विश्वकप को लागि फ्रान्स टीम मा सामेल हुन बोलाइएको थियो। सँग एक मजबूत आगे साझेदारीमा एन्टोन ग्रिजमनपछि उनी दोस्रो किशोरी भए Pelé, एक विश्व कप फाइनल मा स्कोर गर्न - फ्रान्स टूर्नामेन्ट जीत मदत।
एमबाप्पेको विश्व कप क्यारियरले उनलाई फिर्ता-ब्याक लिग शीर्ष गोल स्कोरर जितेको देख्यो। क्लबको फुटबलको लागि अगाडिको प्रतिभा र असाधारण प्रदर्शनहरूले उनलाई आफ्नो कनिष्ठ उमेरमा धेरै सम्मान पक्रेको देखेका छन। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो एक संकेत हो कि Kylian Mbappe ग्रहण गर्न को लागी हो लिओनेल मेस्सी र CR7 को शासन फुटबल GOAT को रूपमा।
आफ्नो जीवनी लेख्दाको समयमा, फ्यानहरू बाध्य छन् Kylian एक विश्व मा एक रियल मैड्रिड कदम को सम्बन्ध मा आफ्नो उद्देश्य र योजनाहरु बताउन। भविष्य जे भए पनि, बाँकी, तिनीहरूले भने जस्तो, सधैं इतिहास हुनेछ।
एलिसिया आयलिसको बारेमा तथ्यहरू - Kylian Mbappe की प्रेमिका:
यो केटी - एलिसिया एलिस - Kylian Mbappe को प्रेमिका र हुन पत्नी छ।
सौन्दर्य को प्यारागोन एक मोडेल हो जसले गायनी एजेन्सी मन्न्की'इनमा आफ्नो क्यारियर शुरू गरे। एलिसिया एलिसको जन्म अप्रिल १ 21 1998 April को २१ औं दिनमा उनको आमा, मारी-चेन्टल बेलफ्रोई र बुबा फिलिप एलिसमा भएको थियो। उनी क्यारिबियन टापु मार्टिनिक, फ्रान्सेली विदेशी क्षेत्र मा जन्म भएको थियो।
Kylian Mbappe के प्रेमिका उनको आमा बुबा को एक मात्र बच्चा हो। उनका बुबा वातावरणीय प्रबन्धक हुनुहुन्छ जबकि उनकी आमाले ड्राइभिंग स्कूल प्रशिक्षकको रूपमा काम गर्छिन्। बच्चाको रूपमा, एलिसियाले आफ्ना आमा बुबाको सम्बन्धविच्छेद देखी - दुई वर्षको उमेरमा। नतिजा स्वरूप, उनको एक्लो आमा (मेरी-चेन्टल बेलफ्रोई) ले उनलाई हुर्काइन्।
एलिसिया आयलिस - सौन्दर्य रानी - उनको आमा मेरी-चेन्टाल बेलफ्रोईले हुर्काइन्।
उनको आमासँग बस्दै, एलिसिया एलिसले रीमायर-मोन्टजोलिको स्कूलमा भाग लिइन् र २०१ science मा विज्ञानको डिग्रीको साथ लाइसीबाट स्नातक गरे। त्यसपछि उनले फ्रान्सेली गुयाना विश्वविद्यालयमा कानूनको अध्ययन गर्न शुरू गरे। मोडलिंगको मायाले उनलाई कानूनी पेशा छोडेको देख्यो।
Kylian Mbappe र Alicia Aylies को तस्वीरहरु इन्टर्नेटमा एकदमै अवस्थित छ। जनवरी २०२१ सम्म, तिनीहरूले अझै पनि आफ्नो सम्बन्ध निजी राख्छन्। हामी नबिर्सौं, Kylian Mbappe की प्रेमिकाले मिस फ्रान्स २०१ of को रेकर्ड राख्यो।
पढ्नुहोस् सेयर किमपेमबी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
लेख्ने समयमा, कुनै कागजातहरू छैनन् कि उनले पहिलो भेट र क्यालिअन डेटि started गर्न थाले। फेरि, एलिसिया आयलिस र Mbappe न त विवाह गरीरहेको छ वा विवाहित छैन र अहिलेसम्म कुनै जैविक बच्चा साझा गर्दैन।
क्यामिल गोटलीब र क्यालिआन म्बप्पेको अल्रेन्ड लव स्टोरी:
उनको पहिलो प्रेमिका हुन अफवाह, उनी कुनै साधारण केटी होइन तर रोयल्टी हो। क्यामिली गट्टलियब मोनाकोको राजकुमारी स्टैफनी र जीन रेमंड गोटलीबकी छोरी थिइन, जुन दरबारको पूर्व अंगरक्षक थियो।
केमिल Gottlieb को हो? मोरेन्होको प्रेममा परेको त्यो लाडे
एलिसिया एलिसलाई भेट गर्नु भन्दा पहिले, Kylian Mbappe कथित रूपमा क्यामिल Gottlieb। उनी फुटबलरसँग भेट्टाउने एकमात्र केटी भइन्। केही अज्ञात कारणहरूको लागि, तिनीहरूको घनिष्ठता बन्द भयो र क्यामिली गट्टलियब अर्को व्यक्तिसँगै गए।
Kylian Mbappe व्यक्तिगत जीवन:
फुटबलर एक मनमोहक र परिपक्व व्यक्ति हो। Kylian एक राम्रो घर पालन पोषण मा बनाइएको एक दृष्टिकोण छ उसले आफ्नो बुबा र आमा बाट मिल्यो। उहाँ एक प्रकारको व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले जीवनका साना चीजहरू बुझ्नुहुन्छ। जब कसैले उसलाई रीस उठाउँछ, उसले के बुझ्छ भनेर बुझ्ने प्रयास गर्दछ - तिनीहरूको अवस्था, प्रतिक्रियाको सट्टा यसलाई हाँस्दै।
Kylian Mbappe को फुटबल बाट टाढा छ?
तपाईले निजी मामिलाहरू पनि लुकाउनुहुन्छ, मिडियाबाट उसको गाडीहरू रोक्नु निकै गाह्रो छ। Kylian Mbappe शीर्ष-एंड कार का एक विशाल प्रशंसक हो - संख्या मा पाँच (जनवरी २०२१ को रूप मा)। लाखौं हरेक हप्ता आफ्नो जेब मा रोलिंग संग, हामी car 2021 मा उनको कार संग्रह मूल्य। Mbappe को ग्यारेज मा विदेशी र क्रूर कारहरु शामिल; फेरारी, मर्सिडीज बेन्ज, अडी, बीएमडब्ल्यू र एक रेंज रोभर।
Kylian Mbappe जीवन शैली तथ्यहरु। उनको कार संग्रह मा एक नजर।
Kylian Mbappe 2021 नेट मूल्य:
जसरी यी जवानले प्रशंसनीय कमाई राख्छन्, उसको पैसा बढ्दै जान्छ यसैले पेग फिगरलाई गाह्रो बनाउँछ। २० करोड भन्दा बढी यूरो उसको जेबमा छिर्दा, हामी अनुमान गर्छौं एमबप्पेको २०२१ नेटवर्थ £ १२० मिलियन डलरको वरपर छ। फुटबलरहरूको सम्पत्ती को स्रोत फुटबलर प्लस समर्थन नाइके र EA खेल संग ठूलो सम्झौता को रूप मा आफ्नो पेशा समावेश छ।
काइलियनले आफ्नो पैसा खर्च गर्ने एउटा तरिका भनेको पानीको टापुको छुट्टिहरू समावेश गर्ने उत्तम छुट्टिको विधि लिएर। उनले प्रशंसकहरूलाई सार्वजनिक गरे कि उनी नियमित पोखरी गाउर र एक्वाटिक वर्कआउटमा विशेषज्ञ हुन्।
Kylian Mbappe को परम्परा बारे तथ्यहरु।
Kylian Mbappe परिवार जीवन:
नजिकको आफन्तको घर भएकोले २०१ 2018 विश्वकप विजेतालाई धेरै थप सम्मान र पुरस्कारहरू प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने विश्वास दिन वास्तवमै मद्दत पुर्‍याएको छ। यस खण्डमा, हामी तपाईंलाई केलियन एमबाप्पेका आमा बुबा, भाइहरू र आफन्तहरूको बारेमा अझ बढी बताउनेछौं।
Kylian Mbappe पूर्ण परिवार फोटो।
Kylian Mbappe बुबाको बारेमा:
विल्फ्रेड एक भूतपूर्व क्षेत्रीय फुटबलर हुन् जसले स्थानीय क्लबमा शिक्षा प्राप्त गरे जहाँ उनका छोराले क्यारियर सुरु गरे। उनले आफ्नो परिवारलाई लोओ-लाग्रन्ज स्टेडियमको अगाडि हुर्काए, उनको पूर्व छिमेकी टेलरले भने। नाइजेरियाली जराका साथ क्यामेरोनियन भएकोले, विल्फ्रेड अझै पनि आफ्नो अफ्रिकी संस्कृतिको सम्मान गर्दछन्। यो हामी यहाँ प्रकट गर्नेछौं जो उनको बच्चाहरु को नाम मा स्पष्ट छ।
परम्परागत बुबाले Kylian Mbappe एक योरूबा (नाइजेरियन जनजाति) बीचको नाम दिनुभयो Adesanmi त्यो भन्नाले "ताज मलाई फिट"। उनको कान्छो छोरा पनि नाम एडेमीबाट - अर्को नाइजेरियाली योरूबा नामको अर्थ "मुकुट तपाईंलाई सुहाउँछ"।
सफल बुबा दूरदर्शिताका मानिस हुन्, उनी अनुशासनहीन पनि हुन् जुन फुटबलको ब्यबश्थापन र कुराकानीको लागि धेरै माग गरिएको दृष्टिकोण हो। उसले आफ्नो छोराले लिने हरेक निर्णय फिल्टर गर्छ र सधै उसलाई मैदानमा राख्छ।
Kylian Mbappe र उनका बुबा, Wilfried दुबै बाटो लागेका छन्।
Kylian Mbappe को आमाको बारेमा:
सन् १ 1974 1990 मा जन्मेकी, फेजा एमबाप्पी लामारी (अरबीमा एल-आमारी भनेर चिनिने) पूर्व ह्यान्डबल खेलाडी हुन् जसले एएस बन्डीको पहिलो लिगमा १ 2000 XNUMX ० को उत्तरार्धदेखि २००० को शुरुमा सफल क्यारियरको साथ काम गर्छिन्।
Kylian Mbappe उनकी आमा बोन्डी पेरिस उपनगरमा फुटबल खेल्ने रूपमा फुटबल परिवारबाट आउँछिन्। अहिलेसम्म, फयजा उनको फ्रान्सेली गृहनगरको ह्यान्डबल क्लबको प्रतीकात्मक व्यक्तित्व हो। यहाँ एक महिला योद्धा छ जब उनी एक दाहिने-विger्गरको रूपमा सक्रिय थिइन्।
Kylian Mbappe आमा भेट्नुहोस् - Fayza Lamari - एक ह्यान्डबल स्टार को रूप मा उनको दिनहरु।
खेल खेल्ने दिनमा फेजा वर्णन गर्दै, पूर्व एएस बन्डी बोर्ड सदस्य जीन-लुइस किम्मौन ले 'पेरिसियनलाई भने;
“उनी हाम्रो ह्यान्डबल खेल हलको ठीक विपरीत हुर्केकी छिन्। फयजाका धेरै भाइहरू क्लबका लागि खेले। अदालतमा उनी लडाकु थिए। कहिलेकाहिँ फेया आफ्नो विपक्षीहरूसँग भेट्ने बित्तिकै असजिलो हुन्छ। ”
व्यक्तिगत नोटमा, Fayza एक धेरै आकर्षक व्यक्ति हो जसले अझै ह्यान्डबल पछ्याउँदछ। उनी आफ्नो छोरालाई ठूलो हुँदै जान पाएकोमा गर्व छिन राम्रो जवान मानिस र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, संसारमा एक महत्वपूर्ण खेलाडी।
त्यहाँ Kylian र उनको अल्जेरियन आमा बीच एक घनिष्ठ सम्बन्ध छ।
Mbappe ब्रदर्सको बारेमा:
तीनमा स Number्ख्यामा हामी तपाईंलाई ब्रुभहरूको बारेमा बढी बताउनेछौं। सर्वप्रथम, हामी सोध्छौं ... संसारमा केहि खेलकुद भाइहरू बीच शान्त बन्धन जस्तै केहि छ? हो, त्यहाँ छ र यी तीन बीचको प्रेम गहिरो छ।
Kylian Mbappe ब्रदर्सलाई भेट्नुहोस्। Jires Kembo-Ekoko (दायाँ) र इथेन Adeyemi Mbappe (बीच)।
Jires Kembo-Ekoko को बारेमा - Kylian Mbappe's Elder भाई:
फ्रान्सेली कole्गोलिज फुटबलरको जन्म जनवरी १ 8 1988 को किन्शासा, जाइर (अब क Cong्गो) मा भएको थियो। उनले आफ्नो फुटबलको चाहना आफ्नो बुबाबाट पाए जो किलियन एमबाप्पेका बुबा विलफ्राइड होइनन्। जिरेस केम्बो-एकोको बुबा केम्बो उबा केम्बो हुन्। उहाँ एक सेवानिवृत्त फुटबलर हुनुहुन्छ जसले १ 1974 XNUMX फिफा वर्ल्ड कपमा डीआर क Cong्गो टोलीका लागि खेल्नुभयो।
केम्बो एकोको छ वर्षको उमेरमा युरोपमा बसाई सरेका थिए र आफ्नो काका र ठूली बहिनीसँग बोन्डी (फ्रान्स) मा बस्थे। यो उनको आमाले उनलाई शिक्षाको लागि फ्रान्स पठाउने निर्णय गर्नुभयो, जबकि उनका बुबाआमा कo्गोमै बस्थे। एक सानो केटा, केम्बो एकोको Mbappé परिवार द्वारा अपनाए। श्री विलफ्राइड Mbappe Jires कानूनी अभिभावक हो, आफ्नो लेट साथीको एक छोरा।
Kylian Mbappe ठूलो भाई उहाँ भन्दा १० बर्ष ठूलो छ। उनी स्ट्राइकर हुन् जसले क्लेरेफोटेन, रेन्नेस, अल ऐन (युएई), एल जैस, अल नस्र र बुर्सास्पोर (टर्की) को लागि चित्रण गरेका छन्। Kylian Jires लाई आफ्नो पहिलो मूर्ति को रूप मा मान्दछ। तिनीहरू केवल साधारण करीव छैनन् तर सँगै बुन्ने।
Kylian र ठूलो भाई - Jires Kembo-Ekoko साँच्चै नजिक छ।
Mbappe सानो भाई को बारे मा - Ethan Adeyemi Mbappe:
वर्ष २०० 2005 मा जन्म, उहाँ Kylian रगत भाई र Fayza Lamari र Wilfried को जैविक छोरा हो। उसको मध्य नाम Adeyemi उनको नाइजेरियाली जरा जसको अर्थ हो कि "मुकुट तपाईंलाई सुहाउँछ।" को मान्यता मा पिताले उनलाई दिएका थिए।
Kylian कहिल्यै आफ्नो सानो भाइ, ईथान Adeyemi अन्धकारमा एक्लै भर्न अनुमति छैन कसम खाएको छ।
Ethan जो आफ्नो दाइ लटन भन्दा years बर्ष कान्छी छ। जवान केटीले किन आफ्ना हातहरू आफ्ना हतियारहरू पार गर्दै औंठा औंठाको साथ प्रस्तुत गरेर मनाउँछन्। पीएसजी स्टार भन्छन् कि यो उसको सानो भाई हो जसले उत्सव शैली शुरू गरे जब उनी फिफामा पिट्छन्।
काइलियनले एकपटक मोथानोसँग एथान अदेमीलाई उनको मस्कट हुन अनुमति दिने सम्झौता गरेका थिए। निर्णय कसरी आएको बारेमा बोल्दै, Mbappe एक पटक भने;
"इथान चाहन्थे कि - यो एक महान क्षण हो। ऊ मेरो टाउको भत्काउँदै थियो। उसले भन्यो "मलाई लैजानुहोस्, मलाई लैजानुहोस्", त्यसैले मैले भने "ठीक छ, म तिमीलाई लिनेछु, आउनुहोस्…"
Kylian एक पटक आफ्नो सानो भाई, ईथान Adeyemi गर्न एक UCL इच्छा पूरा भयो।
Kylian Mbappe हजुरबुबाको बारेमा:
क्यामरूनमा, मार्शलल शमूएल Mappapp Léppé PSG स्ट्राइकर को नाति हो भनेर दृढतापूर्वक आयोजित विश्वास छ। सेवानिवृत्त फुटबलर (जसको १ 1985 1964 away मा मृत्यु भयो) १ 65 .XNUMX / XNUMX सत्रमा अफ्रिकी चैम्पियन्स क्लबहरू कप उचाल्ने पहिलो कप्तानको रूपमा प्रसिद्ध छ।
तपाई Kylian Mbappe र उसको बढ्ता दादा- Maréchal शमूएल Mbappé Léppé बीच समानता देख्नुहुन्छ?
मार्चाल शमूएल एमबप्पी लुप्पी १ 1936 .2015 मा जन्मेका थिए। उनी ओरिक्स बेलोइस, डुआलाको स्ट्राइकरको रूपमा प्रसिद्ध छन्। काइल्यानले आरोप लगाए कि २०१ post मा अफ्रिकी फुटबल कन्फेडेरेसनले पुरानो ग्रान्डलाई मरणोपरान्त "अफ्रीकन लीजेन्ड" ट्रफी जित्यो।
पढ्नुहोस् तर, उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईन्छ
Kylian Mbappe का आफन्तहरू:
Kylian Mbappe काकालाई भेट्नुहोस्। पियर Mbappé बायाँ चित्रण गरिएको छ।
ती मध्ये, सबैभन्दा लोकप्रिय पियरे Mbappé जो विल्फ्रेडको भाइ हो। १ September सेप्टेम्बर १ 18 on। मा जन्म, उहाँ एक फुटबल कोच हुनुहुन्छ जसले एक पटक युएस आइभरी र स्ट्याडे लाभालोइसको व्यवस्थापन गर्नुभयो। कायलियन एमबाप्पेको सबैभन्दा प्रख्यात काका, पियरे एमबप्पेले एक पटक आफ्ना भतिजाले चेल्सी खेलहरू हेर्न धेरै समय खर्च गरे भनेर खुलासा गरेर केही भौंहरू बनाए।
क्यामरूनमा एक मात्र लोकप्रिय नातेदार क्रिश्चियन दिपा हो। उनले आफ्नो अधिकांश जीवन पश्चिम अफ्रिकी देशमा बिताए र हिजोआज आफ्नो काकाको रूपमा सम्मान गरे।
Kylian Mbappe अनटोल्ड तथ्यहरू:
हाम्रो जीवनी राउन्डिंग गर्दै, हामी तपाईंलाई यस सेक्शनको केही रोचक सत्य बताउन प्रयोग गर्नेछौं जुन तपाईंलाई PSG स्ट्राइकरको बारेमा कहिले थाहा थिएन।
तथ्य # १- डोनाटेल्लो उपनामको उत्पत्ति:
किन Kylian Mbappe उपनाम डोनाटोल्लो हो।
२०१ 2017 मा, पर्दा पछाडिको बस्ट-अप एक पटक नेमार र क्यालिआन बीचमा भयो। अवस्थाको आँकलन गर्दा, Mbappe को आमा Fayza खुट्टा असजिलो देखिन्छ उनको छोरा लगातार डोनाटेल्लो - एक किशोर उत्परिवर्ती निन्जा टर्टल तुलना गर्न को लागी। उनी डराउँछिन् कि पनि डानी एल्व्स सँगै मिलेर बनेको छ नेमार Kylian लगातार उनको उपनामको कारण आएको उपनाम संग छेड्न।
लगभग नोभेम्बर (२०१ 2017), थिआगो सिल्वा अगाडि क्रिसमसको शुरुवाती उपहार दिइयो। थोरैलाई थाहा थियो कि नेमार उपहारको सामग्रीको पछाडि थिए। Mbappe बक्स खोल्यो र एक किशोर उत्परिवर्ती निन्जा टर्टल मास्क फेला पारे। उसलाई यो थाहा हुनु अघि, भिडियो भाइरल भयो। प्रशंसकहरूले कछुवाको रूपमा पिच आक्रमणहरू बनाउने लुगा लगाउन थाले। सुरुमा, Mbappe महसुस मजाक धेरै टाढा गएको छ उहाँ हाँसेको थकित छ। तपाईं, उहाँले डोनेटेलो उपनाम स्वीकार गर्नुभयो।
यो उपहारले Kylian Mbappe को डोनाटेलो उपनामलाई जन्म दियो।
तथ्य # १ - Kylian Mbappe Drogba कहानी:
एक पटक, PSG स्टारले चेल्सी कथाले बेवास्ता गरे पछि पीडा महसुस गरे। तपाईं पूर्ण रूपमा होइन डिडियर ड्रोग्बाको गल्ती, घटना २०० Che चेल्सीको च्याम्पियन्स लिगको बार्सिलोनाले जितेको सेमीफाइनल पराजित पछि भयो।
डिडियर ड्रोग्बाले एक पटक क्याइलियन एमबाप्पेलाई वेवास्ता गरे। धन्यबाद, यो खुशीसाथ समाप्त भयो - १० बर्ष पछि।
खेल पछि, Kylian Mbappe तिर लाग्यो डोगाबा सेल्फी लिन तर ड्रोग्बाले बेवास्ता गर्यो। चेल्सी दंतकथा रेफमा फ्युम गर्न र सेल्फीका लागि अनुरोधहरू अस्वीकार गर्नमा व्यस्त थियो।
एक दशक पछि (२०१)), Mbappe आफूलाई Ballon D'or स्टेजमा सँग भेटियो Didier Drogba। यस पटक, चेल्सी किंवदन्तीले अन्ततः उनको २०० in मा चाहेको फोटो दिएर १० बर्षको debtण पूरा भयो।
तथ्य # १ - तलब ब्रेकडाउन र उसले प्रति सेकेन्ड कति कमाउँछ:
जीबीपी (£) मा आय
प्रति महिना: £ 1,670,900 $ 2,268,581 £ 1,510,351.54
प्रति हप्ता: £ 385,000 $ 522,715 £ 348,007
प्रति दिन: £ 55,000 $ 74,674 £ 49,715
प्रति घण्टा: £ 2,292 $ 3,111 £ 2,071
प्रति मिनेट: £ 38 $ 52 £ 34
प्रति सेकेन्ड: £ 0.6 $ 0.8 £ 0.57
तपाईंले Kylian Mbappe हेर्न शुरू गर्नुभयोबायो, यो उसले कमाएको हो।
के तपाईंलाई थाहा छ?… औसत फ्रान्सेली नागरिकले Kylian Mbappe साप्ताहिक तलब कमाउन years बर्ष र months महिना काम गर्नुपर्नेछ।
तथ्य # १ - Kylian Mbappe धर्म:
किन Kylian Mbappe मुस्लिम जस्तो पोशाक? हामीसँग उत्तर छ।
के बोन्डी नेटिभ मिसिल छ? ... प्रशंसकहरूले हालै Mbappe इस्लामिक ड्रेस कोडको फोटोहरू इन्टरनेटमा परेको देखे पछि सोधेको छ। पहिलो कुरा, विलफ्रेंड आफ्नो बुवा अझै इस्लाम रूपान्तरण गर्न अझै छ। अधिक, Fayze एक मुस्लिम उपनामको उत्तर छैन। यसले धर्मबाट Kylian Mbappe को संभावना कम छ भनेर संकेत गर्छ। ऊ विश्वासले इसाई हो।
एक ध्यानपूर्वक अनुसन्धान पछि, हामी PSG स्ट्राइकर आफ्नो गृहनगर को संस्कृति को कारण इस्लामी कपडा लगाउने थाहा पाए। फ्रान्सका काला इसाईहरू क्रिष्टियन्सको कारण धेरै सरोकार राख्दैनन् किनकी तिनीहरू सँगी गोरे मसीहीहरूबाट अलग हुन्छन्। त्यसका लागि, अधिकांश काला नागरिक इस्लामिक कपडा लगाउन मन पराउँछन्।
तथ्य # १ - लोकप्रिय बास्केटबलरहरु लाई Kylian Mbappe उचाई प्रतिस्पर्धा गर्दै:
लेब्रन जेम्स5फिट or वा (०.०9 मी) उचाईमा छ। अर्कोतर्फ, जियनिस एन्टेटोकौंम्पोbफिट ११ इन्च (२.११ मि) उचाईमा रहेको छ भने एमबाप्पेको feet फिट १० इन्च (१. m2.06 मिटर) को तुलनामा। सत्य यो हो कि फुटबल फ्यानहरू धोकामा परेका छन्। Kylian Mbappe लामो खुट्टा छ जसले हामीलाई सोच्छ कि ऊ उचाई छ ऊ वास्तवमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ वास्तवमा हुनुहुन्न।
Kylian Mbappe Height प्रसिद्ध बास्केटबलरको तुलनामा।
तथ्य # १- फिफामा उनको के अभाव छ:
जबकि खेलले उहाँलाई धेरै राम्रो गुणहरू प्रदान गर्दछ, Kylian Mbappe त्यो सही छैन। ऊसँग आक्रमकता, FK सटीकता, दण्डहरू र लामो पासिंगको कमी छ। अगाडि जो फिफाको २०२० कभर स्टार हो यससँग धेरै त्यस्तै विशेषता रहेको छ Sadio मनी.
Kylian Mbappe को संक्षिप्त जीवनी पढ्नको लागि सबै समय लिनुभएकोमा धन्यबाद। हामी आशा गर्दछौं कि यसले तपाईलाई विश्वास गर्न प्रेरित गर्‍यो कि यो सम्भव छ कि तपाइँ आफैले आफ्नै कथा आफैं बनाउन सक्नुहुन्छ। यो आउँछ जब हामी अनुशासन, आत्म नियन्त्रण र क्यारियर सफलता को लागी लगनशील मा राख्नु पर्छ।
तिनीहरूको शब्द र कार्यहरूमा, यसले हामीलाई विल्फ्रेड र फ्याजा लामारीको सराहना गर्दछ। कायलियन एमबाप्पेका आमाबुवाहरूले उनीहरूको छोरा १ life वर्षको उमेरमा नै जीवनको अर्थ पत्ता लगाएका थिए। उनको जन्म पछि केही वर्ष बोंडीमा परिवारले सामना गर्नुपरे पनि उनीहरूले कवच बोन्डीको कठोर समाजलाई आफ्नो छोराको भाग्यमाथि शासन गर्न दिँदैनन्।
Jires Kembo-Ekoko राम्रो क्यारियर नहुन सक्छ, त्यो Kylian पहिलो मूर्ति ठूलो भाइ प्रभाव को लागी धन्यवाद भयो। अब, त्यो भूमिका क्यालिअनबाट इथान अदेमीमा पारित भइसकेको छ जसको भविष्यमा यति धेरै भोक छ।
ध्यान दिनुहोस् कि अगाडि हालमा PS PS रहनको लागि तीव्र इच्छा देखाउँदैन, हामी विश्वास गर्दछौं Kylian Mbappe भविष्य पेरिस देखि टाढा हुन सक्छ - leparisien रिपोर्ट। के केहि मामला, एक कुरा पक्का छ। Kylian Mbappe बाट फुटबलको नेतृत्व को आवरण मा लिन नियत छ लिओनेल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डो.
हाम्रो टीमले Mbappe को मेमोरी राख्दा सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्यो। यदि तपाइँले केहि अवलोकन गर्नुभयो जुन हाम्रो लेखमा सही नदेखिने हो, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। अन्यथा, हामीलाई टिप्पणी सेक्सनमा बताउनुहोस् कि तपाइँ फ्रान्सेली सुपरस्टारको बारेमा के सोच्नुहुन्छ। Kylian Mbappe को बायोको सारांश पाउन, तल हाम्रो र्याking्कि gal ग्यालरी र Wiki तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
जीव विज्ञान प्रश्नहरू
पूर्ण नामहरू: Kylian Adesanmi Lottin Mbappé।
नेट मूल्य: करीव £ १२० मिलियन (२०२१ तथ्या .्क)
जन्म मिति: 20 डिसेम्बर 1998।
जन्मस्थान: पेरिस को १ th औँ arrondissement।
अभिभावक: Wilfried Mbappe (बुबा) र Fayza Lamari (आमा)।
भाइहरू: Jirès Kmbo Ekoko (Adoptive भाई), Ethan Adeyemi Mbappe (युवा भाई)।
पूर्व प्रेमिका: क्यामिल गोटलीब
वर्तमान प्रेमिका: एलिसिया आयलिस।
पैतृक परिवार मूल: विलफ्राइड Mbappe क्यामेरुना र नाइजेरियाली जड़हरु छ।
मातृत्व परिवार उत्पत्ति: फेजा लामारीको अल्जेरियन जरा छ - काबाइल मूलबाट।
बुबाहरूको पेशा: पूर्व क्षेत्रीय फुटबलर, शिक्षक (कोच) र फुटबल एजेन्ट।
आमाहरू पेशा: पूर्व ह्यान्डबल खेलाडी। अब ह्यान्डबल कोच।
काका: पियरे Mbappé, क्रिश्चियन दीपाह आदि।
आन्टीहरू: N / A
हजुरबा हजुरआमा: मारचाल शमूएल Mbappé Léppé (आरोप लगाइएको)।
गृहनगर: बन्डी, पेरिस, फ्रान्स को पूर्वोत्तर उपनगरहरु।
शिक्षा: संगीत स्कूल, AS बोंडी र क्लेयरफोटेन।
मीटरमा उचाई: 1.78 एम।
सेन्टीमिटरमा उचाई: 178 सेमी।
किलोग्राममा वजन: Kg 73 केजी (लगभग)
पाउण्ड मा वजन: १.160.937०..XNUMX। एलबीएस (लगभग)
खेल्ने स्थिति: फर्वार्ड र दायाँ विger्गर
धेरै एनआईसी बचपनले मलाई धेरै भन्दा धेरै सिकेको छ। तपाईले सबै भन्दा राम्रो अनुभव गरिरहनु भएको छ जब तपाईले क्यारियरको साथ प्रगति गर्दै हुनुहुन्छ
Lottin Mbappe एक फिमोनियन कुनै पदार्थ छैन। आफ्ना प्यारा आमाबाबुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। MBAPPE मेरो पहिलो आईडीओएल हो र म ADMIRE यति धेरै छ, भ्यूस ETES MON मोडेल। म दक्षिण अफ्रिकी हुँ मैले फ्रेन्च, अफ्रिकी, जुलू र आईएम पढ्दैछु कि मैले फ्रान्स सफा गर्न कसरी सिकेको थिएँ कबुल टेलिफोन मेरो आईडीओएल
थम्बब्स अप आमाबुवालाई! Mbappe म तपाईंको playstyle मन पर्छ, यति ऊर्जावान, तपाईं एक बाइक जस्तै चलान, म वाह जस्तै छु! जब मैले तपाईंलाई पहिलो पटक खेलिरहेको देखें, मैले थिअरी हेनरी देखे, मैले रोनाल्डिन्होलाई देखें, मेरा फुटबलका मूर्तिहरू। तपाईंको फुटबल क्यारियरमा सबै सर्वश्रेष्ठ।
यो ठूलो र पनि आगामी महान फुटबलरहरूको व्यक्तिगत जीवन तथ्याङ्कहरू पढ्न यो उत्कृष्ट स्थान हो। म अझै अर्को लेख पढिरहेको थिएँ र यो प्रभावशाली थियो।
Mbappe आफ्नो कथा मा धेरै छ। मलाई थाहा थिएन कि उनले आफ्नो कलिलो उमेरमा क्रिश्चियनसँग भेट गरेका थिए। उहाँ राम्रो हुनुहुन्छ र अझै हामी उहाँबाट प्रदर्शन अर्को सीजन आउने प्रतीक्षामा छौं
अन्य खेलाडीहरूको तुलनामा Mbappe फरक पारिवारिक जीवन छ। उनी हस्टलमा बस्छन्। वैसे पनि, उनले धेरै प्राप्त गरेका छन् र अझै पनि दूर जाने आशा गर्दै।
त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन मैले पढेको छु जुन मैले कहिले सुनेको थिइन। मलाई लाग्यो कि यो केवल एक छोटो कथा हो, तर बाहिर जान्छ कि Mbappe को जीवन मा धेरै धेरै भयो।
सधैं जत्तिकै, तपाईं जे गर्नुहुन्छ त्यसमा धैर्य हुनु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईको कुर्सीमा महान चीजहरू हुन्छन्। त्यहाँ कुनै भीड छैन। साथै, जस्तै उसले भने, यो परिश्रम छ जुन गणना गरिन्छ। तपाई जे गर्नुहुन्छ त्यसमा सक्रिय हुनु।
यो Mbappe को एक राम्रो जीवनी पढेर ठूलो थियो। मैले भर्खर लेख देखें र यसलाई पढ्न हिचकिचाएन। मैले उहाँबाट धेरै कुरा सिकेकी छु।
हामी हासिल गर्नु अघि धेरै पार गर्छौं। तपाइँको समयको अधिक समर्पण बिना शीर्षमा पुग्न सजिलो छैन। यो पनि कडा परिश्रम र लगन लिन्छ।
वाह, सबैसँग एक कारण छ। मैले सोधे कि यो सिर्फ हवाई देखि थियो कि उनले आफ्नो हातहरु लाई क्रस संग आफ्नो लक्ष्य मनाए। यो बाहिर जान्छ त्यहाँ यसको एक कारण थियो।
उनीहरूका बच्चाहरूले उनीहरूको सपना वा प्रतिभाहरू पाएका छन् भनेर निश्चित गर्न आमाबाबुले ठूलो भूमिका खेल्छन्। हाम्रा बच्चाहरूलाई समर्थन गर्न यो सँधै राम्रो हुन्छ।
तपाईलाई चाहिएको कुरा हासिल गर्न कडा मेहनत गर्ने पक्ष सधैं हुन्छ। Mbappe एक राम्रो मान्छे हो र यो निश्चित छ कि उ टाढा जाँदै छ।
यस्तो बचपनको कथा पढेर खुसी लाग्यो। त्यहाँ यी आगामी र महान फुटबलरहरु को बारे मा जान्न को लागी धेरै छ। यो पढ्दा राम्रो लाग्यो।
Kylian आफ्नो काँध मा एक राम्रो टाउको संग एक धेरै आधारभूत जवान मानिस जस्तो देखिन्छ। म धेरै खुसी छु कि उसको बुबाले छ वर्षको कोमल उमेरमा उनीलाई प्रशिक्षण दिनको लागि दूरदर्शिता थियो। अब सबै मेहनतको भुक्तानी भइरहेको छ!